Nepali Rajneeti | हेटौंडामा घट्यो निकै अनौठो घट्ना, पुरुषलाई नै ….
हेटौंडामा घट्यो निकै अनौठो घट्ना, पुरुषलाई नै ….
भाद्र ३०, २०७८ बुधबार ८३ पटक हेरिएको
पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा–२,
सरस्वती टोलमा एक पुरुषले अर्का पुरुषमाथि कर’ णी गरेको आ’रोप लागेको छ ।
गत शनिबार साँझ टोलमा स्थानीय ३४ वर्षीय युुवाले छिमेकीको बारिमा गाउँकै ३२ वर्षीय एक पुरुषको गु’द’द्वा’र’मा क’र णी गरेको आरो’प लागेको हो ।
उजु’रीपछि प्रहरीले पीडि’त आरो’पीलाई प’क्राउ गरी आइतबार बयान लिएको छ ।
आइतबार दिउँसो नै पी’डित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा जाहे’री दिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक। प्रवक्ता देवेन्द्र दासले पी’डित पक्षले जाहेरी दिएकाले उक्त मु’द्धा अघि बढ्ने बताउनुभयो । मुलुकी अ’प’राधसं’हिता, २०७४ अनुसार उक्त कार्य दो’षभित्र पर्दछ ।
अ’प्रा’कृ’ति’क मै’थु’न’प’छि शा’री’रि’क’रुपमा पी’डामा परेका पी’डितलाई स्थानीयले उप’चारका लागि शनिबार राति हटौंडा अस्प’ताल ल्याएका थिए । स्थानीय भन्छन्–उक्त दिन गाउँमा साँझ तीजको नाचगान थियो ।
दुई पुरुष एकान्तमा मोबाइलमा अ’श्ली’ल भि’डियो हे’र्न ब’सेका थिए । भिडियो हेर्ने क्रममा उक्त घ’टना घटेको र आफूलाई असहज भएको पी’डितले बताएपछि उनको स्वास्थ्य’मा सम’स्या भएको जानकारी पाएपछि राति नै एम्बुलेन्समा हेटौंडा अ’स्पताल ल्याइएको थियो ।
अस्प’तालले घटनाबारे जानकारी लिएपछि प्रहरीबाट अनुमति नपाएसम्म उ’पचार अघि बढाउन नसकिने बताएपछि स्थानीय राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पुगेका थिए । हाल पी’डितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यो खबर ताजा खबरमा छ।